Isizini for mushroom abathanda kanye ochwepheshe of Kulokhu kwangempela kuqala phakathi ehlobo, lapho evulekile baphakathi kotshani uqweqwe ngaphansi amagatsha eliphansi izihlahla oluzovela kuqala ezicashile isigqoko ezihlukahlukene imibala nosayizi. abazingeli abanolwazi emva kwabo, yebo, bazi ukuthi okumnandi kakhulu futhi esibalulekile izakhiwo ezuzisayo kubo asemhlophe, chanterelles, amakhowe kanye amakhowe. Izimo zethu zihluke kakhulu elikhanyayo ababukeka zezinhlobo sigqamile eqoqwe ngaphandle singahlosile wayephambanisa nabo nabanye amakhowe noma usike i ifomu jikelele sokuvuna okukhulu. Futhi indlela ukulungiselela shaft, akazi zonke uwayehlalise. Nokho, lapho ihlathi isivele ophela isizini phezulu amakhowe grade ke ngokuhamba ayini. Ngempela, manje esefuna ukwazi ukudla izipho ekwindla ka imvelo ebusika ngokujulile ngakho. Futhi bambalwa bayazi ukuthi singene kushaft kuyinto enososo ngempela esihlwabusayo kungaba kwalokho njengabakufanelekele ukuhlaziswa isobho salads, ophaya eqotho futhi namabhanisi. Okuwukuphela okunosawoti kuzodala sauce kakhulu inhlanzi noma cutlets. Yingakho namuhla sifunda indlela marinate amakhowe kushaft.
amaphutha Okubalulekile, okuyinto ungavumeli kushaft hlala isikhundla esilinganayo amamaki amakhowe ephakeme, kukhona iphunga yabo eyinqaba ezingemnandi, kanye ukungabi nakwenzeka kwento ukudla imilenze yabo zezinhlobo kuqhathaniswa ubudala. By the way, lezi kungaba ohlukaniswa degree of eqondisa izigqoko: amakhowe abasha liye laphetha imiphetho, kuyilapho abanye cishe flat. Futhi, iqiniso liwukuthi njengoba zikhula, ziba izikelemu kudliwa ngokuphelele, futhi kwakheka umgodi is emlenzeni. Ngakho-ke, ukulungiselela kushaft zifakwe emanzini anosawoti, zama ukuthola futhi ukuqoqa kuphela zezinhlobo abasebasha. Baqonda kahle ivelele ngokumelene isizinda thick obuluhlaza cap sakhe ophuzi onsundu ngokubomvu futhi Isiqu obukhulu obumhlophe. Babonakala ngoJulayi, iningi lawo phakathi Agasti, futhi ekupheleni kuka-September, ayanyamalala ngokuphelele. Ngaphambi kokuthi uqale ukupheka kushaft enososo, badinga ngokucophelela lungisa, nginqume bese ulahla stem, bese geza cwilisa manzi abandayo, ahlanzekile izinsuku ezintathu. Lokhu kuzokuvumela ukuba akwazi ukuxosha amaphunga alethe ubisi okumunyu Milky, okuvumela isihlobo sabo engenakudliwa ngobubi bawo. Ngenxa yalesi sizathu, bona noma kunjalo ayikwazi omisiwe.
Ngakho, ukuze kulungiselelwe kushaft pickled workpiece ngesikhathi ebusika, sizodinga 1 kg amakhowe kakade ofakwe futhi kabusha ngageza, marinade izithako 2 L amanzi ahlanzekile, 400 g we elula (non-iodized) usawoti, 20 uphizi omnyama allspice, 10 amaqabunga omqhele kanye 2 tbsp. l. uviniga. Oku kushaft ngamathumba e kancane anosawoti amanzi abilayo imizuzu mayelana 20-25, yabe isiwela Wabakhipha umhluzi okuholela, uthele le marinade okuphekwe kusengaphambili bese ngomlilo ngisho ngesikhathi esifanayo. Ngemva kwalokho silindele Ukupholisa egcwele, walala konke izimbiza inzalo nge ketshezi futhi uvalwe uphawu. Lezi amakhowe mahle ukusetshenziswa ezikhaleni ophaya noma hamburger, kanye isobho, zemifino isitshulu kanye salads. Basuke umphelelisi kahle izitsha zakho, ngibenze okwanelisa kakhudlwana nokunomsoco.
Indlela ukulungiselela eyehlukile ipheya juice ebusika: amathiphu kanye zokupheka